African Beauty - Internationally Known
Home » Elements Of Style » African Beauty
June 29, 2016 IKMedia 0 Elements Of Style,
Skin Care Secrets From Africa
(Written in Igbo)
by Chibueze Eke
Ọ bụ ihe doro anya na ndị inyom si Africa na enwe akpụkpọ ahu mara mma nke na-enweghị ntụpọ. Mgbe anyị na America na-echu ura were na-achọ otu anyi ga esi eme ka akpụkpọ ahu anyi di ka nke nwata, werekwa ihe na achapu anu aru dika botox na acho mma, ndị inyom si Africa ọtụtụ mgbe na-ahọrọ uzọ nke nkpa-akwụkwọ iji mee ka ha nwee ezi akpụkpọ ahu. Nke a bu ihe na egosiputa na otutu ndi inyom ndi mba Africa, dika onye ama-ama Iman( Somalia ), nke di afọ iri isii , onye nguputa CNN Isah Sesay ( Sierra Leone ), na onye na eji ejiji Agbani Darego si Nigeria . E nwere ọtụtụ ihe bụ nke na-eme na ndi inyom Africa anaghi aka nka osiso. Otu n’ime ihe ndị a bụ na ha na ewere nkpa-akwukwo na eleta ahu ha anya.
Mgbọrọgwụ: Ihe ndia bu nkpa-akwukwo, okooko osisi na mkpa mmanụ na-eji na-elekọta akpukpo aru anya. Na Nigeria, e nwere ọtụtụ ihe ndi a nke ndị inyom na-eji elekọta akpụkpọ ahu ha anya. Otu na ime ndia nke umu afọ Igbo na eji bu mmanu elu aki. Nke a bu mmanu ana enweta site ná Nkwụ, ma ọ bụghị otu ihe ka mmanụ akwu. Ọ na-amịpụta site na ikuwa mkpụrụ aki ma kworie. Ọbụladi na-enweghị ihe ọ bụla etinyere ya, ọ na-eme akpụkpọ ahu maa mma nnọọ, ma gbaa ezigbo mmanu. M na-ahụkwa ụmụnne m ndị nwanyị ka ha ji mmanụ aṅụ, oroma nkirisi, tomato, aloe vera, na kwa poo-poo maka ndozi anụ ahụ. Mmiri ara ewu na-adikwa mma na akpụkpo ahu.
Author’s Beautiful Sister
• Ihe Oriri: Ọ bu ihe edeworo na akwukwo na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị mma maka nlekọta anụ ahu na mmezi. N’ihi na umu nwaanyị Africa enweghị ike imeli maobu izuta nri bekee, nri ha mejupụtara tumadi mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri. Nke a na-enyere ha aka na-elekọta akpụkpọ ahu ha mma karịa ndị inyom ndi ocha ndi na eri ihe etinyere na mkpo rie nne.
• Nleta ahu puru iche: Ọ bụ a nkịtị okwu ndị ụgbu a na “ahu ndi oji anaghi aka nka”. Ọ bụ ezie na nke a abụghị eziokwu kpamkpam, mana achoputawo na akpukpo ahu ndi oji anaghi afiko osiso ka akpukpo ahu ndi mba ozo. Ihe melanin nke na adi ndi oji na akpukpo ahu juru eju ma nokokwaa onu, nkea mere na anyanwu
anaghi achami na ime akpukpo ahu ha di ka na nke ndi ocha. Ozokwa, ndi inyom Africa na ete ude nke ukuu, n’ihi oburu na ha eteghi ude oge niile, akpukpo ahu ha ga ata mmiri ma ogaghi adikwa mma na anya. Oke ude ha na ete na-emekarị ka akpukpo ahu ha na-egbukepụ egbukepụ mgbe niile.
Previous: Spotlight on Fashion Photographer: Massimo Zerno (Italian Version)
Next: Notes from Gaya